Fikasana fitsaram-bahoaka :: Polisy nataon’ny andian’ olona hazalambo • AoRaha
Niafara tamin’ny fandosiran’ ireo polisy niasa tao amin’ny Kaomisaria Ikongo ny tranga fahasamborana lehilahy iray tany antoerana, tamin’ny 31 jolay sy afak’omaly. Tsy nahazo rariny tamin’ny fitakiana ny hanaovana fitsaram-bahoaka tamin’io lehilahy voatondro ho mpanao fanafihana sy mpamono olona io ireo andian’olona avy any SahalanonaIkongo. Votsotra ilay nenjehina ary saika nirohotan’iretsy farany ireo mpitandro filaminana sy ny fianakaviany raha tsy nahita fiafenana faran’izay haingana.
Nentina tany Ikongo, tamin’ ny 31 jolay tokony ho tamin’ny 4 ora sy sasany hariva, iry lehilahy voasambotra. Soa fa nahazo angom-baovao mialoha ireo polisy momba ny fisian’ny andian’olona avy any Sahalanona ho avy any Ikongo, ny ampintson’io. Nisavorovoro ny toe-draharaha nanomboka teo, indrindra ny lafiny fiambenana an’ilay lehilahy, izay samy tsy afaka niantohan’ny polisy sy ny zandary noho ny fahavitsian’ny mpitandro filaminana.
Nokasaina naterina tany amponja indray ilay voasambotra, nefa nolavin’ny lehiben’ny fonja izany noho ny tsy fisian’ny didy fampidirana am-ponja avy amin’ ny Fitsarana, araka ny fanampimbaovao avy any an-toerana. Teny an-dalana saika hanatitra azy tany amin’ny biraon’ny zandary indray ireo mpitandro filaminana no voalaza fa tafatsoaka io lehilahy io na dia nifatotra rojovy aza. Vao mainka nampitombo ny hatezeran’ireo andian’ olona an-jatony maro, tamin’ny zoma 31 jolay, ny tsy nahitana an’ilay lehilahy sy ny tsy fisian’ny tamingana polisy na iray aza tao amin’ny Kaomisaria. Nirohotan’ iretsy andian’olona indray ny biraon’ny zandary sy ny fonja, fa niveri-maina hatrany ry zareo.
Velona ny fandrahonana tamin’ ny fakàna polisy na ny havany hatao takalon’aina. Efa afaka namonjy fiafenana azo antoka kosa anefa ireo polisy rehetra, raha ny fitantaran’ny loharanom-baovao manaraka akaiky an’ity raharaha ity.
Nilamindamina ny toe-draharaha, nanomboka teo. Nahomby ny fiaraha-miasa teo amin’ireo polisy sy zandary tamin’ny fisorohana ny korontana, izay nampian’ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana tamin’ny fandresena lahatra an’ireo andian’olona mba hilamina. Nankasitraka an’ireo fiaraha-miasa ireo ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, ny jeneraly Ravalomanana Richard, izay nanamafy kosa fa: “tsy maintsy hahitam-bokany ny hazalambo hatao amin’ny fikarohana sy fisamborana an’ilay lehilahy niteraka an’izao savorovoro tany Ikongo izao”.
Fakana an-keriny :: Lehilahy votsotra tany am-pelatanan’ny jiolahy